Madoobe Nuunow oo loo dhaariyey Madaxweynaha Maamul aan aqoonsi helin – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baydhabo – Mareeg.com: Xaflad maanta oo jimce ah ka dhacday xarrunta ADC ee magaalada Baydhabo ayaa xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee lixda gobol loogu dhaariyey siyaasiga Madoobe Nuunow Maxamed oo 3-dii bishaan xilkaas ay u doorteen ergooyin ku shiray Baydhabo.
Xafladda dhaarinta waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo ergooyinkii ka qeybgalay shirka lagu dhisay maamulka lixda gobol ee aan helin aqoonsiga dowladda Federaalka, mid goboleed iyo mid caalami ah toona.
Xildhibaannadii goobta dhaarinta ku sugnaa waxaa ka mid ahaa, Maxamed Ibraahim Xaabsade, Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Sheekh Aadan Madoobe) iyo Maxamed Xuseen Isaaq Afaraale oo dhammaantood ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya.
Munaasabada caleemo-saarka iyo dhaarinta madaxweynaha maamulka Koonfur-galbeed ee Soomaaliya ayaanay jirin wax wufuud ka socota dowladda Soomaaliya oo ka qeybgalay, iyadoo dowladdu horay u diiday aqoonsiga maamulkaas oo ay sheegtay inuu duminayo maamulka KMG ah ee Juba ee fadhigiisu yahay Kismaayo. Sidoo kale, xafladda ma joogin wufuud heer, kheer caalami ah ama heer gobol ah.
Ergooyinka hoggaaminaya shirkii lagu dhisay maamulkan ayaa waxay sheegeen in maamulku uu yeelanayo gole wasiirro iyo baarlamaan, kuwaasoo ay soo kala xuli doonaan madaxweynaha la doortay iyo ku xigeennadiisa iyo golaha guurtida oo ah kuwii doortay Madoobe Nuunow.
Dowladda Soomaaliya dooneysa in Baydhabo saldhig u noqoto haddii shacabku isku raacaan maamul kulmiya 3-da gobol ee kala ah Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose, arrinkaas oo ay diideen ergada dooratay Madoobe Nuunow Maxamed.
Saddexda gobol kale ee uu sheeganayo maamulka Madoobe Nuunow ayaa kala ah: Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo Gedo, halkaasoo horay loogu dhisay maamulka Juba ee Axmed Madoobe hogaamiyo.